चौथो पुस्ताको घाँटू मोह
घलेगाउँकी ७५ बषिर्या अगम गुरुङ, १२ बषिर्य शेषकुमारी गुरुङ र ११ बषिर्या कुमिनी गुरुङलाई हात समात्दै घाँटू सिकाई रहेकी छन् । पहिलोपटक भएकाले शेषकुमारी र कुमिनीलाई गाह्रो परेको छ । नयाँ पुस्ताले परम्परागत संस्कृतिलाई भुल्दै गएपछि घाँटुलाई बचाउन घलेगाउँमा अहिले घाँटू सिकाउने अभियान थालिएको छ ।
भञ्ज्याङ चढ्न तछाडमछाड
अमेरिकी नागरिक वीलियमले विश्वकै अग्लो थोराङ भञ्ज्याङ १० पटक चढिसके । थोराङ चढ्न अमेरिकी पर्यटक कमैमात्रामा आउने गर्छन् । एक विश्वविद्यालयको प्रोफेसर समेत रहेका उनले नेपाल बाहेकका धेरै भञ्ज्याङहरु चढिसकेकाछन् । 'नेपालमा जस्तो हिमालहरु अन्त छैन' उनले अंग्रेजीमा भने, 'त्यसैले त ६५ वर्षो उमेरमा पनि म नेपाल आईरहेको छु ।'
पाल्पा र स्याङ्गजा जिल्लाको संगम स्थल राम्दीमा रहेको पक्कि पुल जिर्ण
लुम्विनी र गण्डकी अन्चललाई जोड्ने पाल्पा र स्याङ्गजा जिल्लाको संगम स्थल राम्दीमा रहेको पक्कि पुल दिनानु दिन जिर्ण हुदै जादा समेत सरोकारवालाको ध्यान नजांदा स्थानीय बासिन्दा चिन्तामा गरेका छन् । सुनौली पोखरा जोड्ने सिदार्थ राजमार्ग अन्र्तगत पर्ने ३२ वटा साना ठूला पुलहरु मध्ये काली गण्डकीमा रहेको सवै भन्दा ठूला राम्दी पुलको उचित मर्मत सम्भार हुन नसक्दा पुल धरापमा परिणत हुदै गएको छ ।
राज गर्दै राजु
लमजुङमा आयोजना गरिएका कार्यक्रममा विरलै होलान्, जहाँ राजु परियार नदेखिएको र नभेटिएको । उनी आफ्नो गृह जिल्ला भएकै नाताले हरेक कार्यक्रममा आउने गर्छन् र लमजुङका वासिन्दाले पनि सहजै स्वीकार्छन् । लमजुङ आउने सुइँको पाउने वित्तिकै मन्त्रीलाई लिन झैँ उनका
तस्वीर : लेखक
पत्रकारको काम समाचार संकलन गर्नु, लेख्नु, सम्पादन गर्नु र प्रशारण/प्रकाशन गर्नु हो । फर्ुसदिला पत्रकारहरु कोही ब्यापार गर्छन्, कोही जग्गाको कारोवार गर्छन् त, कोही म्यानपावरको काम । जुवातास खेलेर दिनसमेत विताउने उनीहरु दर्ुइ नम्बरी धन्दा गर्न समेत पछि पर्दैनन् ।
सपना हो कि बिपना
लमजुङ गुरुङ चलचित्र निर्माणको चहलपहल यतिवेला निक्कै बढेको छ । केही वर्षघि आफ्नै गाउँठाउँमा मात्रै छायांकन र निर्माण हुने परम्परा विस्तारै तोडिँदै छ । लाहुरे कथामा आधारित चलचित्रलाई स्वदेशमै छायांकन गरिने चलचित्रलाई चुनौति दिँदै लाहुरे कथालाई समेटेर कतिपय चलचित्रहरु
Holi is celebrated with great pomp and show in Nepal. Celebrations lasts foraweek in which the entire country gets drenched in the coloured water. Celebrations are of marked importance at Terai and also where Indian community mainly Marwaris have settled.
शहर झरे ग्रामीण युवायुवती
आश गुरुङ प्रतीक,
लमजुङ: लमजुङको सदरमुकाम वेसीशहरका युवायुवतीहरुलाई 'भ्यालेन्टाइन डे' अर्थात प्रेम दिवसको रौनकले उकुसमुकुस बनाएका छन् । बेसीशहरका थुपै्र टिनएजर युवायुवतीहरु १४ फेबु्रअरी अर्थात भ्यालेन्टाइन डेका अवसरमा आफ्नो बर्षौ पुरानो र नयाँ प्रेम साटासाट गर्न विभिन्न तयारीमा जुटेका छन् ।